Ciidamo Soomaali iyo Mareykan ah oo xalay Weerar ku qaaday Deegaanka Daaru Salaam iyo Al Shabaab oo… – WIDHWIDH ONLINE
Published: March 12, 20197:07 am
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo gacan ka helayay kuwa Mareykan ah ayaa xalay howlgal isugu jiray cir iyo dhul waxa ay ku qaadeen Deegaan lagu Magacaabo Daaru Salama oo katirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Sida aan Wararka ku helnay ciidamada huwanta ah ayaa weerar ku qaaday saldhig Al Shabaab kaga sugnaayeen deegaankaasi, waxa ayna ciidamada diyaarado helicopter ah uga dageen duleedka deegaanka iyagoona lug ku galay.
Dadka deegaanka ayaa ku waramay in deegaanka xalay saqdii dhaxe uu ka dhacay iska hor imaad xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada huwanta ah ee weerarka qaaday iyo dagaalyahano katirsan Al Shabaab.
Weerarka ayaa sidoo kale la sheegay in ay qeyb ka ahaayeen diyaarado duqeyn la beegsaday goobo bartilaameed ah oo katirsan deegaanka Daaru Salaam, lamana oga khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay weerarka lagu qaaday deegaanka.
Al Shabaab ayaa war kasoo baxay lagu sheegay in iska difaaceen weerar ay kusoo qaadeen Ciidamo Soomaali iyo Mareykan ahaa, waxa ayna xubno katirsan Al Shababa sheegeen in weerarkaasi fashiliyeen.
Saraakiisha Dowlada Soomaaliya ayaan wali dhankooda ka hadlin weerarkan xalay ka dhacay deegaanka Daaru Salaam iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan weerarkan war kasoo saaraan.
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa kordhiyay weerarada ay ka fuliyaan deegaanada ay maamulaan Al Shabaab, waxaana ciidankan xili habeen ah si lama filaan ah uga degtaan deegaano Shabaab maamulaan.
Wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Dastuurka oo Maanta tagay Magaalada jowhar.
Published: January 30, 20188:40 am
Wadooyinka qaar ee Muqdisho oo xiran & Ciidamada Nabad sugida oo Heegan ku jira
Published: January 30, 20186:43 am